အလိုလိုနေရင်း ဘာမှမသုံးဘဲ ဖုန်းဘေလ်ကုန်နေရင် ဒါတွေစစ်ကြည့်ပါ… - San Thitsa
ခုပဲ ဖုန်းဘေလ်ထည့် ခဏနေ ဇီးရိုးကျပ် ဘာလို့ဖြစ်တာလဲ? အင်တာနက်လည်း မသုံး ဖုန်းလည်းမပြောဘဲ ဖုန်းဘေလ်တွေ ကုန်ကုန်သွားတာက ဒုက္ခတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အသုံးမပြုပေမယ့် ဖုန်းဘေလ် တွေ ဖြတ်တောက်ခံရခြင်းတွေက ကင်းဝေးနိုင်စေဖို့ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းသုံးစွဲသူတွေဟာ ဒါတွေ စစ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။
(၁) အလိုအလျောက် ဖုန်းအပ်ဒိတ် လုပ်တာကို ပိတ်ထားပါ။
ဖုန်းကိုမှ အလိုအလျောက် update လုပ်နေတာကို ပိတ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်။ မဟုတ်ရင် အင်တာနက်ဖွင့်တိုင်း အော်တိုအပ်ဒိတ် အမြဲလုပ်နေတာက သင့်ဖုန်းဘီလ်တွေကို ချက်ချင်းလက်ငင်း ဒိုင်းခနဲ လျော့သွားစေတယ်။ ဘီလ်စားမယ်။ အဲဒီတော့ အော်တိုအပ်ဒိတ်ကို ရှာပြီးပိတ်ပါ။
(၂) အသုံးပြုနေတဲ့ အက်ပလီကေးရှင်း တွေကို ဝိုင်ဖိုင်နဲ့ပဲ အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ။
ဇာပြာတို့၊ ဗီပီအမ်တို့၊ မိုဘိုင်းလ် ဘန်းကင်းတို့လို မသုံးမဖြစ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေကို အပ်ဒိတ်လုပ်မယ်ဆို ဝိုင်ဖိုင်ရတဲ့နေရာ ရောက်မှ လုပ်ပါ။ ဒါက သင့်ကို ဖုန်းဘေလ် မတရားသက်သာစေပါတယ်။ အဲဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေရဲ့ အလိုအလျောက် အပ်ဒိတ်လုပ်တာကိုလည်း ပိတ်ထားဖို့လိုတယ်။
(၃) Background နောက်ခံဒေတာသုံးစွဲခြင်းကို ကန့်သတ်ပါ။
အချို့သော အပလီကေးရှင်းတွေက ဖုန်းကို မသုံးဘဲ ချထားတာတောင် ဒေတာတွေကို သူ့အလိုလို အလုပ်လုပ်ပြီး သုံးနေတာတွေ ရှိပါတယ်။ နားလည်တဲ့သူကို နောက်ခံဘက်ဂရောင်းဒေတာ ပိတ်ထားတာမျိုး လုပ်ခိုင်းပါ။ ကိုယ်မသုံးတော့တဲ့ အပလီကေးရှင်းဟောင်းတွေကိုလည်း ဖုန်းထဲကနေ ဖျက်ပစ်လိုက်ပါ။
(၄) မိမိတို့၏ အကောင့်များ ထဲက ဒေတာတွေကို ဖုန်းထဲကို ကူးယူနေမှုရှိ / မရှိ သတိပြုပါ။
အချို့ အပလီကေးရှင်းတွေက ဖုန်းထဲကို အလိုလို ဒေတာတွေ ကူးထည့်နေတာမျိုး ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ဖျက်လိုက်ပြီးသား ဓာတ်ပုံတွေ ဖုန်းထဲမှာ ပြန်တွေ့တွေ့နေတာ အဲဒီလို အလိုလိုကူးထည့်နေတဲ့ ဖန်ရှင်တွေကြောင့်ပါ။ အဲဒီလို ဖန်ရှင်တွေကို လိုက်ပိတ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။ နားလည်တဲ့သူကို ပိတ်ခိုင်းပါ။
(၅) အွန်လိုင်းကြော်ငြာ (Ads) များကို ရှောင်ရှားပါ။
ကိုယ်တစ်ခုခုကို ကြည့်တဲ့အခါတိုင်း ကြားဖြတ်ဝင်လာတဲ့ ကြော်ငြာတွေကို ပိတ်ပိတ်ပေးပါ။ အွန်လိုင်းကြော်ငြာတွေက အင်တာနက် ဒေတာတွေကို အများကို ကုန်စေပါတယ်။
(၆) ပေါ့ပါးပြီး ဒေတာ အသုံးပြုမှုနည်းသော Browser များကိုသုံးပါ။
ဖုန်းအတွင်း အလိုအလျောက်ပါဝင် သည့်အင်တာနက်ရှာဖွေရေးဆိုက် (Browser)များမှာ ဒေတာ အသုံးပြုမှုများပြား တတ်ခြင်းကြောင်း ဒေတာအသုံးပြုမှုနည်း သည့် Browser များကို ထည့်သွင်းအသုံး ပြုပါ …။
(၇) အွန်လိုင်းမှ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှု့များအတွက် သတိရှိပါ။ ဗီဒီယို အော်တိုပလေး ထည့်ထားတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။
အွန်လိုင်းမှ ဗီဒီယိုတွေ သီချင်းတွေနဲ့ အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်ပုံတွေ အသံဖိုင်တွေကို အော်တိုပလေးနဲ့ ကြည့်လို့ရအောင် လုပ်တာကို ပိတ်ထားပါ။ ကိုယ်ကြည့်ချင်လို့ နှိပ်မှ ဖွင့်ပြတာမျိုးဖြစ်အောင် လုပ်ထားပါ။
(၈) ဒေတာမည်မျှ အသုံးပြုမည်ကို ဖုန်းအတွင်း ကန့်သတ်သတ်မှတ်ထားပါ။
ကိုယ့်ဖုန်းထဲက ဒေတာကိုဘယ်လောက်ပဲ သုံးမယ်ဆိုတာ ကန့်သတ်ထားလိုက်ပါ။ မက်ဂါဘိုက်တွေ ပိုမိုသက်သာ သွားစေမှာဖြစ်ပြီး အပိုအသုံးပြုခြင်းတာတွေ မဖြစ်တော့ပါဘူး။
(၉) ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်တွင် ဗီဒီယိုများ အလိုအ လျောက်ပြသခြင်းစနစ်ကို ပိတ်ထားပါ ။
ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်၏ စာမျက်နှာကို အောက် သို့ ဆွဲလိုက်စဉ် ဗွီဒီယိုများ အသံနှင့်တကွအလိုအလျောက် ပြသနေခြင်းစနစ်မှာ ဒေ တာများ ကုန်ဆုံးခြင်းသာမက ရုတ်တရက် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေနိုင်သော ကြောင့် ၎င်းစနစ်ကို ပိတ်ထားခြင်းဖြင့်ဒေ တာများ ကုန်ဆုံးခြင်းကို လျှော့ချနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် …။
(၁၀) ဒေတာပမာဏ သတ်မှတ်ပေးထားသည့် ပက်ကေ့ခ်ျ များကို သုံးပါ။
ဒေတာပက်ကေ့ခ်ျတွေကို သုံးသလောက်ပဲ ဝယ်ပါ။ လိုမှထပ်ဝယ်ပါ။ ကုန်ကျစရိတ်များ စွာသက်သာစေနိုင်ပြီး မိမိတို့၏ ကုန်ကျမှုများကို လျှော့ချနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။
မိုဘိုင်းလ်သုံးစွဲသူ အနေနဲ့ ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့ ဆက်တင် setting တွေကို ပြန်စစ်ရမယ်။ မလုပ်တတ်ရင် ဖုန်းဆိုင်၊ နားလည်တဲ့သူ၊ လုပ်ပေးတတ်တဲ့သူဆီမှာ ခိုင်းပါ။ ဖုန်းဘေလ်တွေကို အလဟဿ အကုန်မခံပါနဲ့။
အလိုလိုနရေငျး ဘာမှမသုံးဘဲ ဖုနျးဘလျေကုနျနရေငျ ဒါတှစေဈကွညျ့ပါ…
ခုပဲ ဖုနျးဘလျေထညျ့ ခဏနေ ဇီးရိုးကပျြ ဘာလို့ဖွဈတာလဲ? အငျတာနကျလညျး မသုံး ဖုနျးလညျးမပွောဘဲ ဖုနျးဘလျေတှေ ကုနျကုနျသှားတာက ဒုက်ခတဈခု ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီလို အသုံးမပွုပမေယျ့ ဖုနျးဘလျေ တှေ ဖွတျတောကျခံရခွငျးတှကေ ကငျးဝေးနိုငျစဖေို့ မိုဘိုငျးလျဖုနျးသုံးစှဲသူတှဟော ဒါတှေ စဈကွညျ့ဖို့လိုတယျ။
(၁) အလိုအလြောကျ ဖုနျးအပျဒိတျ လုပျတာကို ပိတျထားပါ။
ဖုနျးကိုမှ အလိုအလြောကျ update လုပျနတောကို ပိတျထားဖို့လိုအပျတယျ။ မဟုတျရငျ အငျတာနကျဖှငျ့တိုငျး အျောတိုအပျဒိတျ အမွဲလုပျနတောက သငျ့ဖုနျးဘီလျတှကေို ခကျြခငျြးလကျငငျး ဒိုငျးခနဲ လြော့သှားစတေယျ။ ဘီလျစားမယျ။ အဲဒီတော့ အျောတိုအပျဒိတျကို ရှာပွီးပိတျပါ။
(၂) အသုံးပွုနတေဲ့ အကျပလီကေးရှငျး တှကေို ဝိုငျဖိုငျနဲ့ပဲ အပျဒိတျလုပျပါ။
ဇာပွာတို့၊ ဗီပီအမျတို့၊ မိုဘိုငျးလျ ဘနျးကငျးတို့လို မသုံးမဖွဈ ဆော့ဖျဝဲလျတှကေို အပျဒိတျလုပျမယျဆို ဝိုငျဖိုငျရတဲ့နရော ရောကျမှ လုပျပါ။ ဒါက သငျ့ကို ဖုနျးဘလျေ မတရားသကျသာစပေါတယျ။ အဲဒီဆော့ဖျဝဲလျတှရေဲ့ အလိုအလြောကျ အပျဒိတျလုပျတာကိုလညျး ပိတျထားဖို့လိုတယျ။
(၃) Background နောကျခံဒတောသုံးစှဲခွငျးကို ကနျ့သတျပါ။
အခြို့သော အပလီကေးရှငျးတှကေ ဖုနျးကို မသုံးဘဲ ခထြားတာတောငျ ဒတောတှကေို သူ့အလိုလို အလုပျလုပျပွီး သုံးနတောတှေ ရှိပါတယျ။ နားလညျတဲ့သူကို နောကျခံဘကျဂရောငျးဒတော ပိတျထားတာမြိုး လုပျခိုငျးပါ။ ကိုယျမသုံးတော့တဲ့ အပလီကေးရှငျးဟောငျးတှကေိုလညျး ဖုနျးထဲကနေ ဖကျြပဈလိုကျပါ။
(၄) မိမိတို့၏ အကောငျ့မြား ထဲက ဒတောတှကေို ဖုနျးထဲကို ကူးယူနမှေုရှိ / မရှိ သတိပွုပါ။
အခြို့ အပလီကေးရှငျးတှကေ ဖုနျးထဲကို အလိုလို ဒတောတှေ ကူးထညျ့နတောမြိုး ရှိပါတယျ။ ကိုယျဖကျြလိုကျပွီးသား ဓာတျပုံတှေ ဖုနျးထဲမှာ ပွနျတှတှေ့နေ့တော အဲဒီလို အလိုလိုကူးထညျ့နတေဲ့ ဖနျရှငျတှကွေောငျ့ပါ။ အဲဒီလို ဖနျရှငျတှကေို လိုကျပိတျဖို့လညျးလိုပါတယျ။ နားလညျတဲ့သူကို ပိတျခိုငျးပါ။
(၅) အှနျလိုငျးကွျောငွာ (Ads) မြားကို ရှောငျရှားပါ။
ကိုယျတဈခုခုကို ကွညျ့တဲ့အခါတိုငျး ကွားဖွတျဝငျလာတဲ့ ကွျောငွာတှကေို ပိတျပိတျပေးပါ။ အှနျလိုငျးကွျောငွာတှကေ အငျတာနကျ ဒတောတှကေို အမြားကို ကုနျစပေါတယျ။
(၆) ပေါ့ပါးပွီး ဒတော အသုံးပွုမှုနညျးသော Browser မြားကိုသုံးပါ။
(၇) အှနျလိုငျးမှ တိုကျရိုကျကွညျ့ရှု့မြားအတှကျ သတိရှိပါ။ ဗီဒီယို အျောတိုပလေး ထညျ့ထားတာမြိုး မလုပျပါနဲ့။
အှနျလိုငျးမှ ဗီဒီယိုတှေ သီခငျြးတှနေဲ့ အရညျအသှေးမွငျ့ ဓာတျပုံတှေ အသံဖိုငျတှကေို အျောတိုပလေးနဲ့ ကွညျ့လို့ရအောငျ လုပျတာကို ပိတျထားပါ။ ကိုယျကွညျ့ခငျြလို့ နှိပျမှ ဖှငျ့ပွတာမြိုးဖွဈအောငျ လုပျထားပါ။
(၈) ဒတောမညျမြှ အသုံးပွုမညျကို ဖုနျးအတှငျး ကနျ့သတျသတျမှတျထားပါ။
ကိုယျ့ဖုနျးထဲက ဒတောကိုဘယျလောကျပဲ သုံးမယျဆိုတာ ကနျ့သတျထားလိုကျပါ။ မကျဂါဘိုကျတှေ ပိုမိုသကျသာ သှားစမှောဖွဈပွီး အပိုအသုံးပွုခွငျးတာတှေ မဖွဈတော့ပါဘူး။
(၉) ဖစျေ့ဘုတျချတှငျ ဗီဒီယိုမြား အလိုအ လြောကျပွသခွငျးစနဈကို ပိတျထားပါ ။
ဖစျေ့ဘုတျချ၏ စာမကျြနှာကို အောကျ သို့ ဆှဲလိုကျစဉျ ဗှီဒီယိုမြား အသံနှငျ့တကှအလိုအလြောကျ ပွသနခွေငျးစနဈမှာ ဒေ တာမြား ကုနျဆုံးခွငျးသာမက ရုတျတရကျ စိတျအနှောငျ့အယှကျ ဖွဈစနေိုငျသော ကွောငျ့ ၎င်းငျးစနဈကို ပိတျထားခွငျးဖွငျ့ဒေ တာမြား ကုနျဆုံးခွငျးကို လြှော့ခနြိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ …။
(၁၀) ဒတောပမာဏ သတျမှတျပေးထားသညျ့ ပကျကချေြ့ မြားကို သုံးပါ။
ဒတောပကျကချေ့တြှကေို သုံးသလောကျပဲ ဝယျပါ။ လိုမှထပျဝယျပါ။ ကုနျကစြရိတျမြား စှာသကျသာစနေိုငျပွီး မိမိတို့၏ ကုနျကမြှုမြားကို လြှော့ခနြိုငျမှာပဲ ဖွဈပါတယျ …။
မိုဘိုငျးလျသုံးစှဲသူ အနနေဲ့ ကိုယျ့ဖုနျးရဲ့ ဆကျတငျ setting တှကေို ပွနျစဈရမယျ။ မလုပျတတျရငျ ဖုနျးဆိုငျ၊ နားလညျတဲ့သူ၊ လုပျပေးတတျတဲ့သူဆီမှာ ခိုငျးပါ။ ဖုနျးဘလျေတှကေို အလဟဿ အကုနျမခံပါနဲ့။
← ၅၀၀ ကျပ်တန် ထမင်းဆိုင်၊ ရေတက်ငါးစင်ရိုင်းနဲ့ လှူတော့လှူတယ် လွဲနေတဲ့ ရွှေမြန်မာများ
မိမိအိမ်တင်အလွယ်တကူပြုလုပ်လို့ရတဲ့ ဆားဘဲဥ (ဆားရည်စိမ်နည်း) →
အကြွေးတွေရဖို့ ကြန့်ကြာနေလျင် အမြန်ဆုံးရစေတဲ့ အရဟံပဋ္ဌာန်းလာဘ်ပွင့်ဂါထာတော်
ရောဂါကပ်ဆိုးကင်းဝေးပြီး နတ်တို့ချစ်ခင်သည့် မဟာသမယသုတ် ရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်း အကျိူးများ
တစ်ကြိမ်ဘုရားရှိခိုးလိုက်တိုင်း လူတစ်သိန်းကျော်ကိုကျွေးရတာနဲ့ညီမျှတဲ့ ကုသိုလ်တရားတိုးပွားစေတဲ့ဘုရားရှိခိုးနည်း